Ha u ogolaan qofkasta inuu wax ka qabato aaladda kombiyuutarkaaga! - Jooji Botnets oo leh Dhexdhexaad
Shabakada robot ama botnet waa kooxda kombiyuutarrada juqraafiga ama qoryaha ee ay gacanta ku hayaan spammaraha oo ay adeegsadaan qalab badan. Botnets waxay u badan tahay inay noqdaan shabakado sharci ah oo qalab kombiyuutar ah kuwaasi oo soo saaraya barnaamijyo isku mid ah ama kooxda kombiyuutarada oo ay ku dhaceen fayrasyada iyo nadaafada. Marka lagu rakibo qalabka kombiyuutarkaaga, badanaa oo aan aqoonta dadka isticmaala, kombuyuutarku wuxuu noqonayaa maskax, drone ama kombuyuutar marnaba. Si sax ah uma shaqeyn doonto, mana diidi doonto koontaroolka kantaroolayaasha bot. Frank Abagnale, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Guusha Macaamiisha, wuxuu sharxayaa in xaaladahaas oo kale, barnaamijyada ladagaallanka lidka ku ah ama barnaamijka antivirus waa in la helaa sida ugu dhaqsiyaha badan - sigelei 100 watt clouds.
Botnets waxay ku kala duwan yihiin kakanaanta iyo cabbirka, qaar ka mid ah waa kuwo waaweyn inta ay kuwa kale yar yihiin. Boorsooyinka waawayn waxay leeyihiin kumanaan qof oo zombies ah, iyo botnets yaryar ayaa leh dhowr boqol oo drone ama zombies ah. Botnets ayaa markii hore la helay bishii July 2010, markii FBI ay xirtay Slovenian da'yar. Waxaa lagu eedeeyay inuu ku faafay waxyaabo xaasidnimo ah kumanaan qalab computer ah. Celcelis ahaan, 12 milyan oo kombuyuutar ayaa ku dhacay cudurka botnets. Waxaa jira noocyo kala duwan oo boodhka jilicsan, qaar ka mid ah waxay ku dhici karaan qalabka kombiyuutarka si la mid ah fayrasyada ama khayaanada.
Botnets waxaa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan, qaar ka mid ah kuwaa hoos lagu sharxay:
Diidmada Adeegyada Weerarrada:
Boorarbeel ayaa loo isticmaalaa in lagu weeraro weerar qalab kombuyuutar gaar ah ama shabakad iyo adeegyo carqaladeynaya iyadoo afduubaya xiriirrada. Waxaa intaa dheer, waxay isticmaalaan xawaaraha isku-xirka ee shabakadaada waxayna kordhiyaan khayraadka nidaamka. Diidmada Adeegyada Diidmada (DoS) waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo goobta tartanka.
Dabagalka iyo Kormeerida Gaadiidka:
Botnet sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu waxyeeleeyo qalabka kombiyuutarka ee TCP / IP-ga oo wuxuu ku dabaqayaa codsiyada gaarka ah. Botnets ayaa si ballaaran loo isticmaalaa isku xirnaanta dhowr xabbadood oo zombies ah iyo fayras iyo soo ururin cinwaanada emailka. Waxay u diraan macluumaad badan oo spam ah iyo emaylka phishing ah dhibbanayaasha. Caadi ahaan, zombies iyo qashinka waxaa loo isticmaalaa in lagu saxo magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta si uu botnet u xakameyn karo shaqadeeda kana faa'iidaysto
Barnaamijyada keydinta ee kombiyuutaradaada waxaa loogu talagalay in lagu ogaado bots iyo ka hortagaan inay soo goosanayaan nooc kasta oo macluumaad ah. Waa arrin nasiib darro ah in botnets loo habeeyey si loo yareeyo amniga waxayna ku rakibaan barnaamijyada keylogger ee mashiinada cudurka qaba. Keyloggers waxay caawiyaan qoryaha si ay u xakameeyaan oo ay u xaddidaan barnaamijyada qalabka kombiyuutarka, oo markaa loo isticmaalo in lagu afduubo mid ka mid ah "PayPal ID" ama faahfaahinta kaararka deynta.
Bootaalooyinka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu faafiyo oo lagu faafiyo noocyada kala duwan ee fayruusyada iyo boorsooyinka shabakadda. Waxay isticmaalaan dadka isticmaala waxyaabo xaasidnimo ah waxayna fuliyaan qalabkooda kombuyuutarka iyo sidoo kale aqoonsiyada emailka. Haddii aad riixdo nidaam rikoor ah oo riix ah, botnets waxay heli karaan faahfaahintaada dhaqaalahaaga. Zombies waxaa loo isticmaalaa si loo isticmaalo macluumaadka akhbaarta ah si ay u kasbadaan waxoogaa lacag ah oo ka soo baxa nidaamka rikoorka ah ee riixaya